फ्लोरिकल्चरमा योगदान दिने ७१ जनालाई मन्त्रीद्धारा सम्मान « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
फ्लोरिकल्चरमा योगदान दिने ७१ जनालाई मन्त्रीद्धारा सम्मान
काठमाडौं । फ्लोरिकल्चर एशोसिएसन नेपालले आफ्नो रजत जयन्तीको अबसर पार्दै पूर्व कार्यसमिती सदस्य लगायत फ्लोरिकल्चर क्षेत्रमा योगदान दिने ७१ जनालाई सम्मान गरेको छ ।
कृषि बिकास राज्य मन्त्री सरिता प्रसाईले माला, दोसल्ला र ताम्रपत्र प्रदान प्रदान गर्दै सम्मान गरेकी हुन् । सम्मान गर्दै राज्यमन्त्री प्रसाईले नेपाल सरकार कृषि बिकास मन्त्रालयबाट कृषिका बिभिन्न अनुदान र सहयोगका नाममा गएको बजेट कृषक सम्म पुग्न नसकेको बताउँदै कृषक आफै चनाखो बन्नुपर्ने बताइन ।
बिहिबार राजधानीमा आयोजित रजत जयन्ती कार्यक्रममा कृषि बिकास सचिब डा. सुरोज पोख्रेल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेश लाल श्रेष्ठ, बनस्पती बिभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वर लाल कर्ण, कृषि बिभागका महानिर्देशक डा. डिल्ली राम हर्मा, कृषि उद्यम केन्द्र तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपसभापति हेमराज ढकाल तथा एशोसिएशनकै पूर्व अध्यक्षहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
संघिय ढाँचामा देश अगाडी बढीरहेको बेला आफूहरुपनि त्यसै अनुरुप संघिय संरचनामानै जानुपर्ने बताउँदै फ्यानका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले फ्लोरिकल्चर एशोसिएशनलाई आउनुपर्ने अनुदान सहयोग संघिय सरचना तयार नहुन्जेल फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपाल मार्फत उपलब्ध गराउन पर्ने बताए ।
प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०७४